Qalabka Burburinta: Qalabka Feejignaanta Faa'iidada leh ee loogu Adeegsado GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Ku sii wad daabacaadahayada Mawduuca jabsiga, maanta waxaan si faahfaahsan wax uga qaban doonaa barta Qalabka Hacking. Si loo barto qaar ka mid ah kuwa ugu fiican uguna caansan qalabka software loo abuuray jawiga shaqada ee xirfadleyda oo aad u jecel «Jabsiga & Pentesting ».
Intaa waxaa dheer, waxaa xusid mudan in la yiri Qalabka Hacking si fiican ayaa loo isticmaali karaa labadaba kuwa ku dhaqma "Jabsiga Anshaxa" sida kuwa aan samayn.
Fursadan awgeed, iyo kahor intaanan si buuxda u galin mowduuca, waxaan hoos uga tagi doonaa qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha daabacaadyadii hore ee la xiriiray mowduuca Jabsiga, si kuwa xiiseynaya u-milicsiga mowduuca ay si fudud ku sameeyaan.
"Maxay tahay sababta loogu jabsado GNU / Linux? Sababtoo ah waa la wada ogyahay in xirfadleyda aagga "Hacking & Pentesting" ay ka doorbidaan GNU / Linux kan Windows, MacOS ama kuwa kale, shaqadooda xirfadeed, maadaama, waxyaabo badan, ay ku bixiso qadar badan oo xakameyn ah cunsur kasta waxaa ka mid ah. Sidoo kale, waa maxay sababta sifiican loogu dhisay loona dhexgeliyey hareeraha Khadka Amarkaaga (CLI), taasi waa, bartaada ama konsole. Intaas waxaa sii dheer, way ka amni iyo hufan tahay maxaa yeelay waa bilaash waana furan tahay, iyo sababta oo ah Windows / MacOS badanaa waa bartilmaameed soo jiidasho leh." Anshax xumada: Codsiyada bilaashka ah iyo kuwa furan ee loogu talagalay barnaamijkaaga 'GNU / Linux Distro'
1 Qalabka jabsiga: Qalabka ugu wanaagsan ee loo adeegsado Linux
1.1 Qalabka Jabsiga 1: Metasploit
1.2 Qalabka Hacking 2: Qalabka-X
1.3 Qalabka Hacking 3: Onex
1.4 14 qalab Hacking ah oo dheeraad ah
1.5 Xidhiidhyo dheeri ah oo ku saabsan Qalabka Jabsiga
Qalabka jabsiga: Qalabka ugu wanaagsan ee loo adeegsado Linux
3 ee ugu fiican ee la yaqaan, dhameystiran oo la isticmaalay Qalabka Hacking badanaa waa kuwa soo socda:
Qalabka jabsiga 1: Metasploit
Waxaa loo arkaa Qaabka imtixaanka gelitaanka inta badan laga isticmaalo adduunka. Metasploit waa wax soo saar iskaashi ka dhexeeya bulshada furan y Degdeg ah 7. Waxay ka caawineysaa kooxaha amniga inay sameeyaan wax ka badan inay hubiyaan dayacanka, maareynta qiimeynta amniga, iyo hagaajinta wacyiga amniga; tababarida iyo difaacayaasha difaaca si ay had iyo jeer u sii joogaan hal talaabo (ama laba) hore.
Si aad u soo dejiso, u rakibto oo aad u isticmaasho toos u raac waxyaabaha soo socda isku xirka. Iyo wixii macluumaad dheeri ah soo socda isku xirka.
Qalabka jabsiga 2: Qalabka-X
Waa a qalab jabsiga rakibayo ka imanaya Kali Linux. Qalabka-X waxaa loogu talagalay Termux iyo Nidaamyada kale ee ku shaqeeya Linux. Qalabka-X waad rakibi kartaa wax ka badan 370 qalab jabsiga ku saabsan Termux iyo Qeybinno kala duwan oo ku saleysan Linux, sida Ubuntu iyo Debian, iyo kuwo kale oo badan.
Si aad u soo dejiso, u rakibto oo aad u isticmaasho toos u raac waxyaabaha soo socda isku xirka.
Qalabka jabsiga 3: Onex
Waa maamule xirmo u ah jabsadeyaasha internetka. Onex waxay maamushaa in ka badan 370 qalab jabsiga ah oo lagu rakibi karo hal guji. Intaa waxaa dheer, waa qalab fudud oo dhakhso leh, aad ugu eg Qalabka-X, markaa waa la isticmaali karaa halkii laga isticmaali lahaa Qalabka-X.
14 qalab Hacking ah oo dheeraad ah
Halka kuwa kale Qalabka Hacking La mid ah oo sida waxtar leh waa:
EagleEye: Qalabka Injineernimada Bulshada si aad uga hesho macluumaadka dadka internetka.
Dadweynaha: Qaabdhismeedka Tijaabada Penetration iyo Qalabka Suugaanta.
GoGhost: Waxqabadka sare ee ilaha furan ee loogu talagalay baaritaanka ballaaran ee SMBGhost.
Qalabka Jabsiga: Qalabka loo yaqaan 'Hacking Tool' ee loogu talagalay Hackers.
Hacktronian: Qalabka loo yaqaan 'Hacking Tool' oo loo wada dhan yahay oo loo heli karo Linux iyo Android.
Nexphisher: Qalabka phishing ee horumarsan ee Linux iyo Termux.
Sigit: Sanduuqa Aruurinta Macluumaadka Fudud
SocialBox: Qaabdhismeedka xoog ku weeraridda shabakadaha bulshada qaarkood.
SQLMap: Qalabka SQL ee otomaatiga ah iyo qalabka la wareejinta keydka xogta.
Shaaha - Worm-ka Ssh-Macaamiil: Worm ssh-macmiil lagu sameeyay qaab dhismeedka TAS.
TeleGram-Xoq: Qalab si aad macluumaad uga hesho dadka isticmaala kooxaha Telegram.
UDork: Qoraalka raadinta Google si looga helo macluumaad xasaasi ah faylalka ama buugaagta, iyo howlaha kale.
Hubka Hackers-ka: Qalab Qaboojiye ay adeegsadaan Hackers Web-ka.
Zphisher: Qalab phishing oo otomaatig ah.
Xidhiidhyo dheeri ah oo ku saabsan Qalabka Jabsiga
Si loo ballaariyo liiskan yar ee Qalabka Hacking iyo kuwa kale oo lamid ah oo ka Amniga IT, kuwaas oo sida caadiga ah iskutallaabta ama loogu talagalay Windows iyo Android, waxaad booqan kartaa xiriiriyeyaasha soo socda:
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan qaar ka mid ah qalabka softiweer ee ugu fiican uguna caansan ee loo yaqaan «Hacking Tools», kuwaas oo si gaar ah loogu abuuray jawiga shaqada ee xirfadleyda oo aad u jecel «Jabsiga & Pentesting »; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qalabka Burburin: Qalabka Wax-u-Qabsiga Faa'iidada leh ee loogu Adeegsado GNU / Linux
way noo adeegaan dijo
Qalab noocan oo kale ah waa mid aan faa'iido lahayn haddii aadan aqoon sida loo isticmaalo iyo haddii aadan ku xirneyn koorsooyinka ama buugaagta ama si ka sii fiican, waxaad siisaa koorsooyin faahfaahsan iyaga, maxaa yeelay iyagu waxba ma tarin.
Salaan, Nosirve. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Waxaan rajeyneynaa inyar inyar si aan ulaxariirno midkasta oo kamid ah si aan usii xoojino soo dejintooda, rakibidooda iyo adeegsiga. Sikastaba, aad baad ugu mahadsantahay soo jeedintaada nooca ah.
Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" waxay la timid barnaamijyo ka socda Gnome 40, Wayland iyo in ka badan